Mpanentana ara-tsosialy | Martech Zone
Alakamisy 28 martsa 2013 Douglas Karr
Heveriko fa be loatra ny mpivarotra mijery ny fitaomana ara-tsosialy toy ny karazana trangan-javatra vaovao. Tsy mino aho fa. Tamin'ny andro voalohan'ny fahitalavitra dia nampiasainay ny mpampahalala vaovao na ilay mpilalao mba hampidina entana ho an'ny mpijery. Ireo tambajotra telo dia tompon'ny mpijery ary nisy ny fifampitokisana sy fahefana napetraka… ka teraka ny indostrian'ny dokam-barotra.
Na dia manome fomba fifandraisana roa aza ny haino aman-jery sosialy, dia matetika ireo mpanafatra amin'ny haino aman-jery sosialy no misy fiantraikany amin'ny lafiny iray. Manana ny mpihaino izy ireo, na dia kely kokoa aza ary misy ifandraisany amin'ny indostria na ny lohahevitra eo akaiky eo. Ho an'ny mpivarotra dia mitovy ihany ny olana. Ny mpivarotra dia maniry ny hahatratra tsena iray sy ireo fitaomana mitaona ary hanana izany tsena izany. Ka toy ny nividianan'ireo orinasa dokam-barotra ary nisy ny mpitondra tenin'izy ireo nanangana azy ireo, dia afaka manao toy izany koa isika amin'ireo olona mitaona ny fiaraha-monina.
Ity infographic avy amin'ny MBA amin'ny Marketing miresaka momba ny fomba hahitan'ny olona iray sy hampiasany ny fitaomana sosialy. Tsy azoko antoka fa mifanaraka amin'ilay voambolana aho Mega Influencers ao anatin'ny infographic anefa. Izaho kosa no niantso ireo media sosialy mpitaona sosialy. Mbola misy lohahevitra manokana atokisako an'ireo tompon'andraikitra ireo… fa tsy izy rehetra. Hatoky an'i Gary Vaynerchuk amin'ny divay sy fidirana amin'ny orinasa aho, Scott amin'ny fiara, ary Mari amin'ny Marketing amin'ny Facebook… fa tsy hatoky azy ireo aho handamina ny portfolio stock!
Tags: Ann Handleybrian solisChris Brogangary vaynerchukGuy kawasakiSary torohayliz straussMari Smithrobert scoblescott montyseth godinireo mpamorona sosialy
Ahoana ny fampifangaroana ny paikadin'ny votoatinao sy ny fampielezan-kevitra amin'ny media sosialy